Torohevitra mahasoa ho an'ny mpandeha " Journey-Assist - hacks fiainana
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel
Torohevitra mahasoa ho an'ny mpandeha. Life hacks
Tombontsoa sy lafy ratsy. Rivotra, ranomasina, lalamby, fiara ...
Andraikitry ny fiaramanidina. Overbooking. AirHelp
Samy hafa ny fomba fitsangatsanganana. for и manohitra.
for - Mazava ho azy, ny tombony lehibe amin'ny dia amin'ny rivotra dia ny hafainganana. Indrindra raha resaka dia lavitra. Fa ny hafainganana dia, voalohany indrindra, mamonjy ny fotoananao sarobidy. Izay hitondra anao isan'andro amin'ny fiara na lamasinina mahazatra dia maharitra sidina adiny iray. Ary koa, ny fitsangantsanganana an'habakabaka dia ekena ho fomba fitaterana tena azo antoka. Amin'io lafiny io, izy ireo dia faharoa amin'ny fiaran-dalamby.
- Fameperana entana lehibe. Raha ny fitsipika dia 5-8kg ho an'ny valizy tanana, ary 23-30kg ho an'ny entana iray isaky ny mpandeha. Tsy maintsy mandoa vola fanampiny ianao amin'ny entana fanampiny. Misy ferana henjana ny zavatra azo entina. Amin'ny valizy am-pelatanana, ohatra, tsy afaka mitondra ranon-javatra amin'ny kaontenera lehibe mihoatra ny 100 ml ianao. Ary koa, tsy misy entana mampivadi-po (hety, rakitra fantsika, visy, sns.). Izany rehetra izany dia tsy maintsy raisina raha te hizaha hazavana ianao (amin'ny valizy tanana ihany). Ankoatr'izay, amin'ny faharetan'ny sidina dia mila manampy adiny roa Alohan'ny fotoam-pialana ianao (fotoana tokony hijanonanao eny amin'ny seranam-piaramanidina ho an'ny fiarovana sy ny fidirana ary farafahakeliny antsasak'adiny aorian'ny fotoanan'ny fahatongavana (fanaraha-maso ny pasipaoro sy fitakiana entana). tanàna, ary ireo no sarany fanampiny amin'ny serivisy famindrana, ary tsy misy ny seranam-piaramanidina isaky ny tanàna, izay mety hiteraka korontana ihany koa.
Miomàna hanao fisafoana fiarovana sy rafitra fiarovana amin'ny seranam-piaramanidina.
Tsara ny manana kiraro mampahazo aina, satria, matetika izy ireo dia mila esorina rehefa mandalo ny rindrina mpikaroka metaly. Ary amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny kiraro toy izany dia hahazo aina kokoa.
Manoro hevitra izahay ny hametraka ireo tavoahangy misy ranon-javatra (hatramin'ny 100 ml), solosaina, takelaka ary telefaona ao anaty paosin-kitapo mora vidina, satria mety ho voatery esorina amin'ny ambaratonga sasana fanamarinana izany.
Raha nomanina nandritra ny fotoana maharitra ny sidina, dia noho ny fahazoan-dàlana dia manolotra ondana manokana eo ambanin'ny tenda.
Karakarao ny tsakitsaky maivana.
Amin'ny sidina lava, alao antoka fa hanao fanafana mafana, na mandehandeha fotsiny ao anaty kabinetra.
Ny PowerBank dia azo entina ao anaty kitapo tanana fotsiny, ao anaty fonosana misaraka. Tsy maintsy asiana marika miaraka amin'ny fahaiza-maneho ilay izy. . Ary io hery io dia tsy tokony hihoatra ny fenitra iray. (ny sidina tsirairay dia samy manana ny azy)
for - Mandeha lamasinina no fomba lafo indrindra aseho. Ny hakitroky ny lalamby sy ny lalamby saika amin'ny firenena rehetra dia avo heny imbetsaka noho ny hakitron'ny seranam-piaramanidina. Matetika eo afovoan-tanàna no misy ny gara, izany hoe mitahiry vola amin'ny famindrana. Ary koa, amin'ny fiaran-dalamby, afaka mitondra sakafo sy zava-pisotro amin'ny habetsahana azo ekena ianao. tsy misy fetra toy izany amin'ny enta-mavesatra. (toy ny fitsipika, ny fetra ho an'ny entan'ny tanana dia 50kg). Afaka matory amin'ny fiaran-dalamby ianao amin'ny alàlan'ny fampiononana. Midika izany fa afaka manao fiampitana alina ianao ary mankafy ny fizahana mandritra ny andro.. Mandritra izany fotoana izany, dia afaka mitahiry amin'ny hotely ianao. . Mora izany raha toa ka miaraka amin'ny fianakavianao na orinasa ianao, afaka mividy efitrano iray ianao, ary mahaliana ny mandany fotoana eny an-dalana. Ny lamasinina no endrika fitaterana azo antoka indrindra. (ny fitsangantsanganana an-dalamby azo antoka indrindra any Amerika, avy eo any Eropa, avy eo any Russia, ary mihemotra amin'ny resaka fiarovana, firenena Aziatika toa an'i India, Sri Lanka.
- Ity dia fomba iray somary milamina amin'ny dia. Tsy toy ny Auto, ny fiaran-dalamby dia tsy hijanona amin'ny toerana tianao. Ny haavon'ny fampiononana dia miankina amin'ny karazana kalesy izay nividiananao ny tapakila. Ilay seza voatokana ihany, fa tsy ny toerana ahazoana aina indrindra amin'ny tontolon'ny lamasinina, ary mety kokoa amin'ny dia fohy.
Arakaraky ny halaviran'ny trano fidiovana anao no ahazoana aina kokoa noho ny antony mazava.
Raha matahotra ny tsy hahatsiaro tena intsony ianao, aza misalasala mangataka toromarika mba hamohazana anao.
Mividiana tapakila haingana araka izay azo atao. Ny tapakila novidina tao anatin'ny 45 andro dia mazàna mora kokoa.
Tonga eo amin'ny lampihazo mialoha. Mety hanam-potoana bebe kokoa hitadiavana ny kalesinanao eo an-tsisin'ny lampihazo.
Tsy mamporisika ny hitondra sakafo mora simba amin'ny lamasinina izahay. Mazava ho azy, aza avela tsy arahi-maso ny fanananao manokana (antontan-taratasy, zavatra sarobidy).
Karakarao ny "tsakitsaky" sy rano fisotro.
Amin'ny dia lavitra, amin'ny lafiny rehetra, manaova hafanana, tsara, na mandehandeha manodidina ny kalesy.
Travel ny fiara
for - Ny fivezivezena amin'ny fiara no fahalalahana manao hetsika. Azonao atao ny mijanona amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na mihodina mankany amin'ny toerana manintona tsy voaomana. Ary koa, tsy toy ny Avia, afaka mandeha soa aman-tsara amin'ny sisin'ny fiara ianao miaraka amin'ny sakafo sy zava-pisotro. Ny fananana "tsakitsaky" mandritra ny dia mandeha amin'ny fiara dia hitahiry vola be sy fotoana. Fiarovan-tena amin'ny fiarovana ny toetr'andro ratsy, ny fahaizanao mivezivezy haingana eo anelanelan'ny zavatra manintona, ary ny fahaiza-mivoaka miaraka aminao amin'izay rehetra ilainao. Tsy misy tambin-karama, ny fahaizan'ny fiaranao ihany no voafetra.
- Ity fomba ity dia tsy mety amin'ny dia lavitra intercontinental. Miadana kokoa ihany koa izy io raha oharina amin'ny rivotra. Ary raha mila miala amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B lavitra fotsiny ianao, dia angamba tsy ny fiara no fomba tsara indrindra. Mandreraka ihany koa ny mandany ora maro ao ambadiky ny kodia. Mandritra izany fotoana izany dia ahiana foana ny fahatapahan'ny fiara na ny lozam-pifamoivoizana. Ary na dia miatrika ireo olana ireo aza ny fiantohana, dia mety hisy fiantraikany hatrany amin'ny drafitrao io.
Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fandidiana tsy fahombiazan'ny fiara.
Alohan'ny fivahinianana dia manoro hevitra mafy izahay mba hitsidika tobin'ny serivisy ary azonao antoka fa milamina tsara ilay fiara.
Tandremo amidy. Pad pades, kodiarana arosom-bolo, haavon'ny tsiranoka, sata ny bateria sy ny maro hafa.
Ataovy azo antoka fa mandrakotra ny fanamboarana fiara any ivelany ny fiantohana anao.
Ao anaty fiara dia tsy maintsy manana kitapo fanampiana voalohany ianao, jiro fanilo, tariby "manazava" ny fiara, antsy ho an'ny fehikibo, fambara vonjy maika, kodiarana fanampiny, andiana fitaovana, charger ho an'ny telefaona, fitaovana fandraisam-peo ary maro hafa.
Avy amin'ny sakafo dia natolotry ny haka sakafo kaloria avo tsy mety ho simba: voanjo, cashews, voankazo maina, serealy sakafo maraina, fisotro rano rano sy ny maro hafa.
Fijanonana fiara ho an'ny fanafana sy ny fialan-tsasatra, dia ilaina atao isaky ny roa ora.
for - Nanjary nalaza kokoa ny fitsangatsanganana bus (indrindra any Eropa). Raha ara-toekarena dia mahasoa kokoa noho ny fomba fitsangatsanganana hafa izy ireo, ankoatry ny lamasinina. Amin'ny fitsangatsanganana bus koa dia manintona mahaliana maro karazana. Amin'ireto fitsangatsanganana ireto dia samy mahita tanàna sy tanàna manodidina ianao. Firenena maromaro no azo jerena ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Rehefa mitsangatsangana, ny vondrona voalamina amin'ny fitsangantsanganana toy izany dia omena fotoana hialana amin'ny tsipika. Tsy ilaina ny miatrika ny olan'ny fandaminana. Vita sy heverina ho anao ny zava-drehetra. Toy ny fitsipika, ianao dia hiaraka amin'ny mpizaha tany, izay afaka manontany amin'ny fanontaniana rehetra.
- ny tena lesoka dia ny aotobisy ihany. Mandany fotoana be dia be amin'ny toerana mipetraka tsy mahazo aina. Raha mora tratry ny aretina mihetsika ianao, dia tsy ho anao io fomba fitsangatsanganana io. Ny fijanonana amin'ny alina dia mety ho eo amin'ny sisin-tany. Matetika, ny vidin'ny fitsangantsanganana toy izany dia tsy misy afa-tsy sakafo maraina kely ihany. Mety ho hafa ny mpiara-dia amin'ny dia. Tanora mitabataba sy olon-dehibe maniry fahanginana. Maika haingana ny fitsangatsanganana bus.
Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny zavatra andrasana amin'ny fitsangatsanganana bus amin'ny pejy fitaterana ho an'io dia io.
Alohan'ny handefasana fitsangatsanganana manokana dia fantaro hoe ahoana ny fiara fitateram-bahoaka, inona ny serivisy hoentina eny an-tanety.
Mahafinaritra tokoa ny matory amin'ny fiara fitateram-bahoaka omena. Hisy fijanonana amin'ny alina ve. Misy fitsangatsanganana ao anaty ny vidiny. Misy 220v ao anaty sambo ve. andramo ihany koa ny mamantatra ny firafitry ny taona ao amin'ilay vondrona.
Aza hadino fa mazàna ny tanora ary mazàna no tsy maimay.
Any aoriana dia tsy dia mihetsika ny aretina.
Miomàna ho amin'ny famindrana matetika ny entanao avy amin'ny bus mankany amin'ny hotely ary miverina.
Mitahiry «snacks» sy rano fisotro eny an-dàlana.
Mba hahazoana fampiononana fanampiny, tahiry amin'ny fonon-tsofina sy kiraro mba hatory.
Ny ondana eo ambanin'ny tendany dia mety ho befluous ihany koa.
for - Mety amin'ny fanovana traikefa matetika. Angamba ilay karazana dia lavitra mampahazo aina indrindra. Aza mandany fotoana amin'ny fivezivezena, satria mandritra ny dia ianao dia afaka miala voly, mitsidika fitsaboana spaoro, efitrano fanaovana spaoro ary dobo filomanosana, misakafo any amin'ny trano fisakafoanana misy sakafo isan-karazany, mijery seho fialamboly isan-karazany eny ambony sambo. Fiposahan'ny masoandro sy fiposahan'ny masoandro tsy manam-paharoa isan'andro! Rivotra an-dranomasina. Ny fitsangantsanganana toy izany dia miala sasatra na dia ny hozatra sarotra indrindra aza. Ny fahadiovana sy ny serivisy amin'ny sambo fitsangantsanganana dia ambony lavitra noho ny amin'ny hotely. Mandresy mora foana ny sakana amin'ny fiteny. Fantatry ny mpiasa matetika ny fiteninao.
- Tsy fahazakana sambo. Ny soritr'aretiny dia mety hanimba ny ambiny. Ankoatr'izay, tsy ny olona tsirairay no te hahita ny ranomasina isan'andro ary tsy afaka milomano ao. tsy mety ho an'ireo matahotra rano na toerana malalaka. Matetika koa, fotoana kely dia kely no omena hahafantarana ny kolontsaina sy ny fahitana ireo firenena notsidihina. Ny fanamafisana dia bebe kokoa amin'ny fandaniana fotoana amin'ny liner. Na dia lehibe aza ny sambo, dia toerana voafetra miaraka amina hetsika maromaro. Matetika ianao no mitsidika ireo tanàna misy seranana, izay tsy mahaliana foana.
Azo jerena ao amin'ny antsipirihany ny antsipirian'ny lalamby pejy fitodiana natokana ho azy ireo.
Fantaro tsara ny lalana, miaraka amin'ny vanim-potoana sy ny toetrandro amin'ireo firenena mikasa hitsidika azy ireo.
Aza adino - ny sambo fitsangantsanganana dia transatlantic, izay midika fa tsy hahita tany mandritra ny fotoana maharitra ianao.
Raha toa ianao ka mety ho rendrika anaty ranomasina dia alao antoka fa manana ilay antsoina hoe "anti-rolls" ilay sambo.
Miantehitra amin'ny fanafody ho an'ny aretina.
Angamba tokony handeha amin'ny fomba vitsivitsy ianao hanamafisana ny fitaovana vestibular.
Safidio ho anao ny faharetan'ny fitsangatsanganana. Mba tsy ho sosotra.
Ny fomba fitsangatsanganana rehetra dia misy ny mahatsara sy maharatsy azy. Mila misafidy eo amin'izy ireo ianao miankina amin'ny safidinao manokana, ny toetran'ny vatana ary, mazava ho azy, ny asa fivezivezena. 🙂
Mirary soa eny an-dalana!
Hivoitra avy amin'ny fahatsapana fa efa manana hevitra momba izay tianao ianao, ary izay antenainao amin'ny sisa.
Ny drafitry ny hetsika ohatra dia toy izao manaraka izao:
Mila manangona vaovao voalohany momba ny vidin'ny tapakila ianao, ny vidim-piainana, ny fandaniana isan'andro amin'ny fisotroana, fitsangatsanganana, famindrana. Mazava ho azy, aza adino ny vidin'ny fiantohana, hahazoana visa (raha ilaina).
2. Lalana sy fandaharana fijanonana.
Mialà amin'ny fahalalana mialoha ny toerana sy toerana mahaliana hafa ao amin'ny firenena halehanao. Raha manan-janaka ianao dia fantaro ny fisian'ny fotodrafitrasa sy ny fialamboly ho azy ireo. mifototra amin'ity fampahalalana ity, sorito eo ho eo ny làlana sy ny fanisan-taonan'ny hetsika ataonao.
Pasipaoro iraisampirenena (alao antoka fa misy pejy maimaim-poana, ary mbola misy 6 volana alohan'ny fahataperan'ilay antontan-taratasy). Aza hadino koa ny mitandrina hahazoana fiantohana ara-pahasalamana. Raha ilaina dia mitadiava visa mialoha. Ao amin'ny tranokala manokana an'ny masoivoho, misy ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny fitsipika hahazoana karazana visa isan-karazany.
4. Fividianana na tapakila tapakila.
Ny fomba iray mety dia ny fandinihana loharanom-pahalalana manokana agregator Internet natao hikarohana zotram-piaramanidina an-jatony eto amin'izao tontolo izao hitadiavana ireo tolotra mahasoa indrindra ho anao. Eny, na ny tsotra sy tsy dia mahomby, dia ny mitsidika pejy ny loharanon-tsaintsika natao hamahana ny tinona no asa.
5. Famandrihana hotely.
Tahaka ny an'ny drafitra teo aloha, ity asa ity dia afaka manampy koa. pejy amin'ny loharanon-karena. Na avereno indray, mitadiava fanampiana amin'ny Internet, ahafahanao mahita tranokala manokana - mpanangona fikarohana ao amin'ny hotely. Aza adino ny mieritreritra ny famindrana avy amin'ny toerana ahatongavan'ilay firenena mankany amin'ny hotely.
6. Fiampangana eny an-dalana.
Hiresaka momba ny entana sy fitaovana ara-teknika izay ilaina amin'ny fitsangatsanganana amin'ireo faritra mety amin'ity pejy ity izahay.
7. Karakarao ny tranonao
Aza adino ny maka antoka fa mandritra ny fialan-tsasatrao dia milamina amin'ny tranonao ny zava-drehetra. Ka manondraka ny voninkazo, ary eo an-tanana tsara ny biby fiompy. 🙂
Ity drafitra iray manontolo ity, ary koa ny fanontaniana rehetra mivoaka eny an-dalana, dia azo zahana amin'ny fampiasana ny vavahadin-tserasera, amin'ireo fizarana noforonina ho an'ity. Eto ianao no hahita ny fampahalalana ilaina rehetra momba an'io.
Inona no zava-dehibe tsy adino?
Fahazoan-dàlana iraisam-pirenena mitondra fiara (raha ilaina)
Karatra plastika (jereo ny lalànan'ny fameperana tsy ho lany)
Ampahafantaro ny bankinao fa hampiasa karatra plastika any ivelany ianao.
Toeram-pidiovana manokana sy kosmetika
Akanjo sy kiraro
Ataovy azo antoka fa misy vola ao amin'ny kaonty
Zahao ny safidy sy ny vidiny
Zahao ny fahaizan'ny fampiasana karatra SIM eo an-toerana ho an'ny Internet sy ny serasera finday
Ny fitetezam-paritany sy ny rindrambaiko ilaina
Ahoana ny fomba manidina mora, tsy misy fandoavana vola. (Hitahiry amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka)
Ny fotoana tsara indrindra hividianana tapakila fiaramanidina
Manandrama mividy tapakila mialoha. Teny optimum, ity 42-45 andro handehanana. Raha maka izany ianao teo aloha dia misy risika hividianana lafo, satria ny sidina dia tsy mbola afaka mamantatra ny tena vidin'ny sidina iray, ary mampiasa vidiny eo ho eo, mifantoka amin'ny lazan'ny sidina amin'ny taona vitsivitsy lasa izay.
Andro ahoana amin'ny herinandro no tapakila mora kokoa
Raha mety aminao izany dia manoro hevitra izahay fa handray tapakila mandritra ny herinandro eo ho eo. (Talata-alakamisy). Amin'ny fotoana toy izany, matetika ny sidina dia foana foana. izay midika fa liana amin'ny fivarotana tapakila mandritra ny andro toy izany ny seranam-piaramanidina.
Sambo avy amin'ny sidina
fampiasana tolotra manokana avy amin'ny sidina. Matetika izy ireo dia manomboka amin'ny faran'ny vanim-potoana, na ny fanokafana lalana vaovao.
!!! Fa aza adino fa ny tolotra manokana dia matetika voafetra amin'ny fisintomana tapakila na ny alalana avy amin'ny kitapo omena.
Misoratra anarana amin'ny takelaka
Misoratra anarana amin'ny fampahalalam-baovao momba ny orinasam-pitiavana tianao, na amin'ireo tranokala-aggregators. Ka alefa aminao ny fanolorana fanomezana rehetra sy fampahalalana mahaliana momba ny fampiroboroboana.
Hetsika kely 🙂
Ilaina ny mandinika fa ny mpampangorona dia afaka manombatombana ny tanjonao miorina amin'ny fividianana tapakila teo aloha. Ary ny sasany amin'izy ireo dia mety hampiakatra ny vidin'ny tapakila ho anao irery. Noho izany, amin'ny tranga sasany dia asaina mankany amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina na tranokala - mpanangona amin'ny maody incognito na aorian'ny fanesorana mofomamy ao amin'ny navigateur.
Na ny singa toy ny fitaovana itadiavanao tapakila aza dia afaka mitana andraikitra. Ary mety ho toy izany koa fa rehefa mitady tapakila amin'ny iPhone na iPad ianao dia mety ho somary avo kokoa ny vidiny.
Tsara kokoa noho izany, mampiasa programa tsy fantatra anarana izay manafina ny fitaovana sy ny toerana. Satria zava-dehibe ihany koa ny toerana. Ohatra, serivisy maro ho an'ny mpampiasa avy any Eropa no lafo kokoa noho ny an'ny mpampiasa avy amin'ny firenena CIS.
Raha mety aminao izany dia azonao atao ny manandrana manidina tsy mankany amin'ny tanàna iray izay ilainao, fa amin'ny mpifanolo-bodirindrina (tsy dia malaza ary, araka izany, miaraka amin'ny saram-piaramanidina ambany). Tena mety hisy dikany izany mamonjy. Fa raha izany dia mila ilaina ny fampiasana fitaterana an-tanety.
Rehefa mividy tapakila dia omena anao hisafidy seza (matetika dia tsy andoavambola ny fahafahana). Saingy mitombina ny tsy handaniam-bola an'io, satria amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana sidina, dia afaka izany fahafahana izany, miaraka amin'ny mety ho avo lenta.
Aiza no mora kokoa hividy tapakila fiaramanidina
Matetika ny vidin'ny tranonkala - aggregators (ny mpanelanelana aminao sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka) dia ambany noho ny vidin'ny tapakila mitovy amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina. Rehefa dinihina tokoa, matetika ny mpanelanelana dia omena fepetra manokana.
Ireto ambany ireto dia ny endrika karoka an'ny be mpitia indrindra indrindra - Aviasales
Orinasa ambany sidina.
Ireo dia mitondra fiaramanidina an'habakabaka ahafahana manidina ara-toekarena noho ny fandavana ny serivisy mpandeha sasany.
Ohatra, harona na sakafo maimaimpoana an-tsambo miaraka amina kojakoja kely indrindra :). Ny zotram-piaramanidina lafo vidy dia tsy vitan'ny serivisy ihany, fa koa ny fiezahany hihazona fiaramanidina tanora, izay midika fa tsy dia mila mandany vola amin'ny fanamboarana izy ireo (aorian'ny fampiasana roa na telo taona, dia mivarotra ny fiaramanidiny ireo fiaramanidina lafo vidy). Ary koa, ny elanelana misy eo amin'ny seza amin'ireto fiaramanidina ireto dia kely kokoa (74-76cm, fa tsy 81-96cm mahazatra), izay midika fa betsaka kokoa ny azo raisina amin'ireo mpandeha an-tsambo.
Ny seranam-piaramanidina lafo vidy dia mampiasa seranam-piaramanidina lavitra ny toerana malaza tsy dia malaza, izay midika fa kely kokoa ny vola azony amin'ny fiaramanidina amin'ny fampiasana. (ho an'ny mpandeha iray, dia io angamba ny vidin'ny famindrana fanampiny).
Ny fandoavam-bola miafina
Raha mividy tapakila avy amin'ny zotram-piaramanidina lafo vidy dia ho azo antoka izany tandremoe ho an'ny fandoavam-bola tsy fantatra. Toy ny, fandoavam-bola misaraka amin'ny sakafo an-tsambo, na ny vola enti-mavesatra, na ny fisavana arak'asa ho an'ny sidina.
Ary ny tena zava-dehibe kokoa, azo antoka fa tsy azo averina ny tapakila novidiana tamin'ny seranam-piaramanidina lafo vidy. Mila mandoa vola fanampiny ianao amin'ny zavatra rehetra.
Manidina amim-pifaliana sy tsy misy tambiny! 🙂
Ny entana entinao miaraka amin'ny dia amin'ny dia an-tongotra dia mizara ho sokajy roa:
Entana entina mitondra entana - Izay alainao amin'ny fiaramanidina.
Misy kitapo fijerena entana izay handeha any amin'ny fitoeram-bolan'ny entana.
Ankehitriny amin'ny antsipiriany:
Mitondra entana miaraka amina kabine ianao. Toy ny fitsipika, izy io dia ahitana kitapo iray, na kitapo, na kitapo kely. Ny ankamaroan'ny mpitatitra dia mametraka fepetra takina manokana momba ny habeny sy ny lanjan'ny kitapo-tànana.
Ny lanjany sy ny lanjan'ny kitapo tanana
Dimensions amin'ny santimetatra - 55cm x 40cm x 20cm
Fandrefesana entana mitondra entana
Avelanay ihany koa ny safidy hanitatra mihoatra ny refy toy izany raha tsy mihoatra ny habetsaky ny soatoavina telo (ny halavany, ny sakany, ny haavony) 115sm.
Ny lanja - 5-8kg (12kg ho an'ny kilasy fandraharahana) Mety ho hafa izy io, ary aza hadino ny mijery ireo vaovao farany ao amin'ny tranokalan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. inona no omen'ny sidina. Rehefa mividy tapakila dia tsy maintsy miseho ireo fepetra ireo.
Isaky ny seranam-piaramanidina dia misy kirany mizana entana hita ao amin'ilay faritra alohan'ny fisavana, ampiasao izay hitanao raha sendra be loatra ianao.
Toy izany koa amin'ny kirany, ny seranam-piaramanidina dia manana firafitra manokana izay ahafahanao mamaritra raha tsy mihoatra ny fahazoan-dàlana azo itondrana ny entanao entona.
Azonao alaina amin'ny kabinetra misaraka amin'ny entana ny tanana:
Laptop / tablet / telefaona
Folder misy antontan-taratasy
Gazety / boky
Raha mitondra zavatra avy amin'ity lisitra ity ianao fa tsy ao anaty kitapo-tànanao, dia tsy raisina ny lanjan'ireo zavatra ireo! Azo ampiasaina izany raha miahiahy ny be loatra ianao.
Efa voarara! mitondra am-paosy:
Izay ranony ao anaty fitoeran-java-bitika misy takelaka mihoatra ny 100 ml.
Makiazy ao anaty fitoeran-java-maniry misy takelaka mihoatra ny 100ml.
Fanapitrihana maranitra ary manapaka ireo zavatra (antsy penky na souvenir antsy, cutlery, maniky setra, famaody vita amin'ny vyor)
Fitaovana miasa (marmara, visy, sakamalaho, fantsika, pilao, sns.)
Betsaka ny orinasa mandrara ny fitaterana ny vokatra avy amin'ny biby: fur, ivory, sakafo.
Biby an-trano na bibidia (maningana ny alika mpitari-dalana)
Zavatra toa fitaovam-piadiana. (basy poleta sns)
Fitaovam-piadiana misy karazany. Baomba. Zava-mangatsiaka sy radioaktifa.
Jiro mifono solika
Rano mora afangaro
Fitaterana fitaovana finday kely misy batterie lithium: scooter elektrika, scooter listrik, sepway.
Ny raharaha amin'ny aretin-tsaina miaraka amin'ny fitaovana arovana, boaty manokana, kitapo ho an'ny fitaterana vola, sns., Izay misy entana mampidi-doza, toy ny batterie lithium sy / na pyrotechnics, dia voarara tanteraka ny fitaterana amin'ny alàlan'ny rivotra
Ny bateria Powerbank sy lithium-ion dia tsy azo entina afa-tsy amina paosy, fa miaraka amin'ny fameperana sasany. Misimisy kokoa momba ity ambany ity.
Kitapo (ho an'ny fitoeran'entana)
Kitapo ny kitapo, na kitapo, na kitapo misy ny lanja azo avela.
Matetika 20-23kg ho an'ny kilasy tapakila mahazatra
Amin'ny kilasim-barotra, manan-kery kitapo roa hatramin'ny 32k ny olona tsirairay, ny olona tsirairay.
Ity fampahalalana ity dia tsy maintsy hazavaina voalohany amin'ireo loharanom-baovao momba ny mpampita anao
Avela sy mandrara ny fitaterana any anaty entana
Ny lisitra avy amin'ny famaritana ny kitapo tanana no raisina ho toy ny fototra:
Item 1 - 6, Afaka mitondra entana ianao raha tsy manana olana.
Fehintsoratra 7-8 dia azo entina ao anaty entana raha toa ka nahazoana alalana ary manaraka ny fepetra takiana amin'ny mpitatitra.
Fehintsoratra 9-14 FADIAVANA !!! ho an'ny fitaterana amin'ny entana rehetra.
Voarara ny mitondra kitapo Powerbank fahaiza-manao rehetra. Amin'ny alàlan-tanana ihany ary omena ny fameperana sasany. Ny momba izany eto ambany.
Fitaterana ranon-tsolika anaty kitapo-tànana. Fitsipika sy fitsipika
Ny tsiranoka dia: rano sy zava-pisotro, shampoo, crème, lotion, shower shower, toothpaste, ranomanitra, vahaolana ho an'ny lenta, gloss gloss ary mascara, anisan'izany! izany hoe rano rehetra na saika manakaaka.
Ny akora toy izany dia azo entina ao anaty entana maloto ao anaty fitoeran-javatra tsy mihoatra ny 100 ml. Ny habetsaky ny ranon-javatra dia tsy tokony hihoatra ny 1 litatra. Ireo tavoahangy sy siny rehetra ireo dia mila aforeto ao anaty kitapo misy tranga na tarehy.
Ny alikaola na ditin-kazo manitra novidiana tao amin'ny Duty Free (izany hoe, aorian'ny fandefasana ny fifehezana) dia azo alaina aminao ao amin'ny efitranon'ny fiaramanidina, raha toa ka tsy vita ny fonosana fonosana (tombo-kase).
Tokony ho tsaroana ihany koa fa mitovy ny haben'ny entana ho an'ny kitapo tànana ho an'ny seza tsirairay - kajy ny fangatahanao mba tsy hanakitsahana ny zon'ny mpandeha hafa hampiasa ny toerana enton'izy ireo voatokana ho an'ny kitapo tanana.
Mitondra PowerBanks sy bateria Lithium-Ion anaty entana entina
Ny bateria lithium-ion sy ny bankin'ny herinaratra dia azo entina amin'ny entona entina fotsiny. Fady mafy ny manamarina fitaovana toy izany!
Tokony hatao marika ireto bateria ireto ireto:
ny isan'ireo singa ao amin'ny fonosana (raha mihoatra ny bateria iray dia alefa).
Famerana amin'ny fitaterana batterie PowerBank sy lithium-ion
Tsy tokony hihoatra ny fahafahan'ny banky herinaratra na ny bateria 30 000 Mah.
Ny fahefana dia tsy tokony ho avo noho ny 160 Wh
Zahao ny lanjan'ny entanao sy ny entanao
Alohan'ny handaozana (raha misidina amin'ny tanana fotsiny ianao), dia mitandrema ny mandefa ny lanjan'ny lanja. Mandanjalanja ny entana entin'ny entana any an-trano (tsara ny mizana ao an-trano) na any amin'ny seranam-piaramanidina, alohan'ny hanaovana fisavana amin'ny sidina (misy mizana ao amin'ny seranam-piaramanidina). Raha mahita tombony ianao dia avy eo alohan'ny hisavana amin'ny sidina:
Apetaho amin'ny sweater na, ohatra, palitao / trowel misy poketra sy kiraro faran'izay henjana indrindra,
Zavatra kely nefa mavesatra ao am-paosinao
Esory eny am-pelatananao ny entana rehetra azonao alaina ao anaty kabinetra nefa tsy mandanjalanja. (Tanisao eo am-piandohan'ny lahatsoratra)
Mitondrà sakafo ho any amin'ny kabinetra
Afaka maka sombin-kanina miaraka amina lalantsara fiaramanidina ianao, izay tsy misy fofona tena matanjaka: sandwich, ravina, cookies, waffles, sombin-kase, voankazo, voankazo, legioma, voankazo maina, sns .. Raha manidina zazakely ianao, dia ampy ny sakafom-boankinin'ny zaza. na mihoatra ny 100ml aza, tsy hisy hisy manaisotra na dia amin'izao fotoana izao, ary koa ny fitaterana ny pram, dia tokony horesahina mialoha ny mitondrana entana.
Syringes ao anaty kabinetra
Raha misy ilana tsindrona mandritra ny sidina, izay midika fa ilaina ny fisian'ny fitrandrahana, dia noho izany dia ilaina ny fanamafisana ny dokotera amin'ny tanana. Raha tsy izany, aza avela hiditra ao anaty kabinetra ny tsentsina.
Entina hakana ny salon io
Ny entana lafo vidy rehetra sy ny fitaovana elektronika
Kitapo-fanampiana voalohany (ny fanafody rehetra dia tsy maintsy ao anaty fonosana tany am-boalohany sy miaraka amin'ny toromarika).
Fitaterana ny zavamaneno
Azonao atao ny mitondra zavamaneno madinika ho valizy tanana. Ho an'ny lehibe dia tsy maintsy mividy seza mpandeha mitokana.
Kitapo mivalona amin'ny tapakilanao
Aza hadino ny mijery ny fisian'ilay sticker valizy amin'ny tapakilanao rehefa avy nijery. Raha ny entana very entana, tsy misy kitay dia sarotra kokoa ny mitady azy.
Raha manana fanontaniana sy soso-kevitra aminao ianao rehefa mifehy ny seranam-piaramanidina, dia andramo hitsaboana azy ireo, satria natao ho fiarovana anao manokana izany.
Nentina tao anaty kabinetra sy tao amin'ny efitrano fitahirizam-baravarana, dia tsy nateraky ny fangatahan'ny orinasam-pitaterana ihany, fa amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fanjakan'ny firenena tsirairay koa.
Fomba hifidianana hotely
Rehefa mifidy hotely dia tsy mijery ihany sary efitra. Na dia tsara tarehy aza ireo sary dia tokony mbola mandinika ihany ianao faritra misy efitranonaseho tamin'ny isa. Tokony ho azonao fa ny fitaovana fakana sary dia afaka manamboatra tranobeny amin'ny kabinetra, fa tsy hamitaka ny isa.
Feo haingam-peo ao anaty efitrano
Raha tsy matory rehefa tabatabae làlana, zahao jerena moa fa ohatrinona mitabataba any amin'ny trano fandraisam-bahiny. Afaka ao Google Maps mahasalama. misy làlan-dàlana lehibe eo akaikiny, eo amin'ny toerana akaiky anao ny klioba amin'ny alina na toerana hafa fialamboly izay manangona mpizaha tany. Tandremo ny taonan'ny hotely (ny datin'ny fandefasana azy matetika dia voalaza ao amin'ny famaritana).
raha tsy mbola tanora ny hotelyavy eo dia misy ny fihoaram-pefy avo lenta amin'ny tsy fahita firy amin'ny fikandrana taloha.
Aza adino ny mamaky hevitra momba ny hotely izay mahaliana anao. Tandremo izay miverimberina ao anatin'ny famerenana. Efitrano may mate, na maloto ao amin'ny efitrano fandroana. Raha haverimberina matetika dia io ilay izy.
Ny sokajy ny trano fandraisam-bahiny, ny stardom, na izany aza, ny vidiny, dia tsy ny tondro fatra indrindra. Avy amin'ny trano fandraisam-bahiny mankany amin'ny hotely fitsipi-pitondran-tena mety miovaova. Ary koa, ny haavon'ny efitra fiononana amin'ny trano fandraisam-bahiny samihafa azo antsoina hoe hafa (deluxe, deluxe, standard, sns). Mendrika ny mijery ny zavatra rehetra karazana karazany trano fandraisam-bahiny sy izay atolony.
Aiza no mandeha ny varavarankely
Raha anao io dia zava-dehibe, dia aza adino ny mijery izay ivoahan'ny varavarankely ivelan'ny efitrano (io koa no aseho ao amin'ny famaritana ny efitrano). Ary raha milaza izy ireo fa tsy mijery ny ranomasina ny varavarankely, dia tsara raha hanamarina izany noho ny fanampian'ny Sarintany Google. Satria mety tsy mankany amin'ny ranomasina ny varavarankely, fa mankany amin'ny ranomasina, izay tsy tombony foana raha tsy eo ny hotely morontsiraka voalohany.
Tandremo tafiditra ao daholo ny fandoavam-bola rehetra amin'ny vidiny voalaza amin'ny tranokala.
Matetika rehefa mandoa ianao, izay voasoratra tao anaty boky kely, ohatra, dia 10 isan-jato hetra na fanangonana amin'ny fanadiovana isa.
Fanakanana karatra ara-bola rehefa mametraka efitrano fandraisam-bahiny
Miomàna hiatrika ny zava-misy fa ny karatra mety hanananao manakana vola iray (ohatra, vola mitovy amin'ny fandoavam-bola mandritra ny iray na roa andro), ho antoka fa tsy hanome ny efitrano ianao. Vakio tsara ny zava-drehetra momba ny famandrihana trano fandraisam-bahiny sy efitrano. Tsy ho azo ampiharina eo. Ary koa inona no fe-potoana azo atao amin'ny fanafoanana isa iray maimaim-poana.
Serivisy hotely karama
Azafady azafady mba hahitana Wi-Fi, fiantsenana, sakafo maraina... Inona no tafiditra ary inona no tsy tafiditra ao anatin'ny vidiny. Izany rehetra izany dia afaka mampiakatra ny vidim-piainana raha ampitahaina amin'ny tarehimarika voalaza voalohany.
Aza adino ny mitahiry azy karatra plastika izay namboarina ny famandrihana. Ny hotely maro dia manan-jo hangataka izany mba hampisehoana izany.
Ireo asa fanompoana sy zavatra tsy ilaina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Mieritrereta izay tena ilainao ao amin'ny efitrano. Ohatra, mitovy TV tsy ilaina mihitsy raha tsy mikasa ny handany fotoana be ao an-trano ianao. Indraindray tsy tokony hatao ambanin-javatra fanamory rivotra mankasitraka mpankafy valin-drihana. Izy io dia hamonjy, ary miaraka amin'izay dia hamonjy ny fahasalamana.
10 zavatra haleha
1. kitapo misy kitapo.
Tokony horaisina miaraka aminao izany, na inona na inona karazana fialan-tsasatra nomanina - morontsiraka, tanàna na mavitrika. Tsy mila olona efa mandeha na aiza na aiza amin'ny valizy izy. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mbola aleony ny poketra kely noho ny valizy lehibe, nefa miaraka amin'izay dia mila miverina avy any amin'ny fitsangatsanganana miaraka amina harona feno mandray azy ireo izy ireo.
2. Fiarovana amin'ny halatra.
Mba hiarovana ny valizinao amin'ny fangalarana dia azonao atao ny mampiasa padlock tsotra (ary miaraka amin'ny lakile fa tsy kaody), izay tsy mamela ireo mpamindra entana miasa eny amin'ny seranam-piaramanidina hiditra ao anaty valizin'olon-kafa, saingy tsy hahasoa izany raha toa ny tompon'ny valizy gags ka tsy mahita azy intsony. Amin'ny tranga toy izany, ny fivarotana fizahan-tany dia manana fanairana izay mitarika rehefa manandrana mamindra ny valizy ianao. Safidy iray hafa dia valizy voaaro manokana, izay tsy azo hokapaina, sokafan'ny zipper, ary amina fomba hafa amin'ny ankapobeny.
3. Fivarotana finday manana karatra.
Ny hevitra banal toy izany dia ny fitsidihana mpizaha tany ivelan'ny seranana amin'ny findainao finday sy ny fampiasana ny navigatera tsy misy Internet noho ny antony tsy fantatra. Na izany aza, maro amin'ireo fampiharana (na dia karamaina aza) no manana torolàlana anatiny ho an'ny toerana mahaliana. Amin'ity pejy ity ao amin'ny "Rindrambaiko fitsangatsanganana“, Afaka mahita rindrambaiko toy izany ianao.
4. Batteran'ny portable (Powerbank).
Raha mivezivezy any amin'ny tanàna lehibe ianao, izay misy ny Starbucks, isaky ny zoro, dia ampy ny maka fotsiny ny valiny amin'ny telefaona. Na izany aza, ho an'ireo izay mandeha amin'ny natiora sy tanàna kely sy vohitra dia afaka manome satroka fanampiny ho an'ny findainao ianao. Tena ilaina indrindra raha toa ka fakan-tsary sy toy ny mpanamory ilay finday avo lenta, satria "mandoro" angovo betsaka avy amin'ny batterie izy io.
5. Ny sata iraisam-pirenena.
Mba tsy hitafy harona feno kitapo ho an'ny iPhone, MacBook, fakan-tsary sy mpamaky, ny charger universal dia natokana, izay misy "famoahana" sy "fampidirana" hafa, noho izany dia mety ho an'ny trano eoropeana sy ho an'ny Amerikanina ireo.
6. Fanafody tanana.
Mandritra ny fitsangatsanganana, matetika misy snack mandeha an-dalana, raha ny fitsipi-pidiovana dia voitsakitsaka, izay mitondra amin'ny fikorontanana amin'ny tsinay sy tsimokaretina. Mba hisorohana an'io dia mitondra otrikaretina miaraka aminao. Mavitrika ny vatan-tànana, fa ny sela kely dia mahomby kokoa: mamela anao tsy vonoina ny tanana fa tsy amin'ny tanana fotsiny, fa koa ny sasany amin'ny fantsona manokana, amin'ny tongotra manokana, ary koa ny fikapohana ary ny bruises.
7. Kitapo voaisy tombo-kase (slider).
Ireo kitapo mihamaingina, tery matevina, metaly samy manana ny habeny samihafa dia tena ilaina amin'ny fitsangatsanganana. Azo ampiasaina hitehirizana ranon-javatra izy io, izay raisina anaty kitapo, hanaterana koskety ao anaty valizy, ary miaro tahirin-kevitra amin'ny tsy mando ihany koa. Azonao atao ihany koa ny mitondra sweaters fluffy ao anatiny, satria indraindray mientina amin'ny akanjo hafa ao anaty valizy, manarona azy ireo "fluff".
8. Fikarohana taratasy.
Ny felam-bolo vita amin'ny hoditra dia ny haben'ny valopy mailaka. Ny pasipaorao, pasipaoro ary antontan-taratasy ilaina amin'ny fitsangatsanganana dia apetraka ao aminy.
9. crème universite.
Rehefa mikasa amoron-dranomasina ny fialan-tsasatra, matetika dia tsy misy olona manadino ny fantsona misy tara-masoandro sy handoro gela. Na izany aza, ireo izay manodidina ny tanàna dia matetika manadino momba ny crème fatotra mahazatra. Saingy tsy vitan'ny hoe manavotra ny hoditra amin'ny lozam-pifamoivoizana mandritra ny vanim-potoana efa zatra amin'ny rano hafa, fa koa manamaivana ny mandoro avy amin'ny masoandro, ary koa manasitrana ny voan-tsokosoko mipoitra avy amin'ny dia lavitra, ary manafoana ny soritr'aretin'ny allergy.
10. nangalatra tady.
Tsy maintsy ilaina amin'ny vehivavy rehefa mandeha, fa ny lehilahy kosa mety ho tonga mahomby. Azo atao tsara ny manosotra ny tenanao ao anaty fonosana matevina raha misy tsy fahatomombanana mangatsiaka tsy ampoizina eny an-dalana, dia afaka manarona ny lohany amin'ny orana sy masoandro izy ireo na mametaka tavoahangy ao amin'ny Duty Free mba tsy hifanonan'izy ireo.
Ahoana ny fomba hanamboarana kitapo.
Ny filaharana amin'ny fanangonana zavatra hipetraka
Mieritrereta aloha aiza ary nahoana ianao mitondra fiara. Raha tora-pasika ny ambiny, dia mila zavatra maivana sy akanjo vitsivitsy amin'ny hariva. Raha betsaka ny fitsangatsanganana, dia mila akanjo tsotra sy mety ianao. Raha ny tsara indrindra, ny fitafiana dia tokony ho mora mifanentana.
Ny farafahakeliny mahazatra indrindra dia amin'ny isa 5 4 3 2 1 ... Akanjo ivelany 5. Atin'akanjo 4. Kojakoja 3. Kiraro 2 tsiroaroa. Akanjo ba 1 (raha ny fialantsasatra amoron-dranomasina)
Нepremenno afaka andro vitsivitsy dia mijery toetr'andro, tampoka mangatsiaka na mifanohitra amin'izay aza dia hisy hafanana tsy mahazatra. Afaka manitsy ny lisitry ny zavatra ilaina izany.
Eto, mazava ho azy dia miankina amin'ny asa ny zava-drehetra sy ny fomba hanoloranao mandany fotoana.
Any amoron-dranomasina, ohatra, dia tsy ilaina manokana na tsy ilaina mihitsy, ary ny masoandro, bibikely ary fomba fiarovana hafa dia ho sarobidy kokoa, zavatra maro no azo vidiana ary mahaliana eo no eo.
Ny zavatra toy ny shampoo, shower shower, savony, ny nify dia mety ho ao amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Izahay dia tsy manoro hevitra ny handraisana firavaka be loatra. Ankoatry ny zava-misy fa afaka misarika ny saina tsy tiana izy ireo, ary ny ahiahy tsy ilaina amin'ny fiarovana ny fialan-tsasatra dia hihoatra lavitra.
Kitapo fanampiana voalohany amin'ny dia
Indraindray kitapo fanampiana sy fikarakarana manokana betsaka no nilaza HERE
Socks sy akanjo ambany
Ny ba kiraro sy ny atin'akanjo dia azo ahorona ary ampidirina anaty kiraro, amin'izay dia hitsitsy toerana sy hiaro ny kiraro amin'ny fahasimbana. koa, ny kiraro dia mety ho tranga ho an'ny solomaso na "fragility" hafa
T-shirt, pullovers sy ny zavatra mitovy dia mihena kely sy mihosinkosina raha tsy mihodina. Izany dia ahafahanao mampiditra azy ireo bebe kokoa, ary izany dia antoka fanampiny fiarovana entana.
Kiraro, raha mihoatra ny tokana iray dia tsara kokoa ny mametaka tsiro amin'ny toerana samihafa ao anatin'ny valizinao / kitapo / kitapo, mba tsy hifanalavoana.
Balonchiki sy fitoeram-pitaovana hafa
isan-karazany paompy fitoeran-drano sy fitoeran-drano, manoro hevitra izahay fa apetrakao amin'ny toerana samihafa izany mba tsy handratra ny misy azy ireo.
Aza adino koa fa ny siny izay misy ranon-tsolika misy litera mihoatra ny 100 ml dia voarara tsy hiditra am-pelatanan'ny tanana eny amin'ny fiaramanidina. Izany hoe, izy ireo dia tokony ho entina ao anaty entana, izay handeha ho any amin'ny efitrano maloto ny fiaramanidina.
Amin'ny kitapo an-tanana, ny fonosana ary ny tavoahangy hafa hatramin'ny 100 ml dia be dia tsy maintsy rakitra anaty boaty na kitapo mangarahara.
Manoro hevitra izahay mba tsy hanadino fa misy fihoarana avo lenta tianao hovidina fahatsiarovana amin'ny maha souvenir, na angamba feno kokoa.
Hatramin'ny ririnina ka hatramin'ny fahavaratra, na biraon'ny ankavia amin'ny seranam-piaramanidina sy ny gara
Hevero ihany koa fa betsaka ny zavatra mety atao mividy an-toerana... Ary raha manidina avy amin'ny ririnina mangatsiaka mankany amin'ny mafana ianao, dia tadidio fa ny zavatra ririnina dia azo avela ao anaty valizy manokana any amin'ny seranam-piaramanidina mba tsy hitondrana azy ireo na aiza na aiza miaraka aminao mandritra ny fialan-tsasatra raha toa ka misy ny dia kasainao hatao.
Fonosana ny valizinao alohan'ny entana (seranam-piaramanidina)
Tsarovy koa fa raha matahotra ianao fiarovana ny fisehoan'ny valizy, tsara ny manangona azy anaty sarimihetsika miaro. Misy serivisy toy izany any amin'ny seranam-piaramanidina. (ny vidiny eo ho eo dia mitovy amin'ny 5 dolara).
Betsaka ny fanontaniana m momba azy io. Inona no ilainao alaina ary izay tsy azonao alaina.
Ny fandrafetana ny kitapo fanampiana voalohany dia miankina amin'ny hoe aiza ary amin'ny firy ianao no mikasa ny hivahiny. Ary mazava ho azy, zava-dehibe ihany koa ny vanim-potoanan'ny mpandray anjara.
Kitapo fanampiana fanampiana kely indrindra mandritra ny dia:
Mpandrafitra: Nosh-pa, Analgin, Beralgin, Ketanov.
Ho an'ny olan'ny vavony: Carbon activated, Smecta, Mezim.
Antipyretika: Iboprofen, Paracetamol.
Antihistamines (ho an'ny allergy): Suprastin, Claritin, Tavegil.
Na eo amin'ny ekoatera aza dia afaka mahita hatsiaka ianao, satria mila zavatra avy amin'ny hatsiaka: Coldrex, Flukold, Cold Flu na ny toy izany.
Antiseptika: Hydrogen Peroxide, iodine.
Aza hadino ny bandage, band-aid
Ny fahadiovana dia mitaky antiseptika, hasiana tànana, mando lena sy maina.
Kitapo fanampiana voalohany ZAZA amin'ny dia fitsangantsanganana (kitapo fanampiana fanampiana ho an'ny ankizy)
Eto isika dia manoratra izay tokony ho fanampin'ny kitapo fanampiana voalohany ho an'ny zaza:
Rano tsara orona (mety ho an'ny taonan'ny zaza). Nazivin, Aquamaris.
Sitroka amin'ny tendany. Gedelix, Hexoral.
Latsaka an-tsofina (raha ny fampitam-baovao otitis, fa tsy eo amin'ny fiaramanidina amin'ny fametrahana ny sofina. Eo amin'ny fiaramanidina dia tsara kokoa ny manome ankizy kely fotsiny ny felaka). Manampy izany.)
Antipyretic. Labozia Tsefekon. Syrup Nurofen.
Raha misy ny fanapoizinana na ny tsinain'ny tsina, Hilak-forte, Linex, Gastrolit (ho an'ny fivalanana sy mandoa), Sady misy glycerin (ho an'ny constipation).
Ny fanafody antiallergenic. Drops Fenistil.
Ankoatr'izay, dia mila ny ranon-maso (amin'ny ranomasina) Albucid.
Tena ilaina ny fanasitranana ny zaza amin'ny fery sy ny solomaso. Bodyagi, ohatra.
Mba hisorohana ny aretina amin'ny tsina, ny chamomile ao anaty kitapo dite dia tsy ho be menaka.
Aza hadino ny mametraka thermometer elektronika amin'ny kabinetra fitsaboana!
Kitapo fanampiana voalohany zazakely
Kalgel (miaraka amin'ny teething)
Espumisan (sakafo tsy mahazatra an'i Neny dia mitarika entona ao anaty zaza)
Bepanten (avy amin'ny diaper rash)
Na izany na tsy izany dia tsy ilaina ny maka ny rehetra etsy ambony. Raiso izay manampy anao sy izay efa hainao tsara.
Ny fandrafetana sy ny habetsaky ny kitapo fanampiana voalohany dia mety miovaova, arakaraka ny fomba hanoloranao fotoana.
Raha mitsangantsangana any Eropa ianao, dia mitokàna amin'ny patchus callus.
Kitapo fanampiana voalohany Asia. endri-javatra
Any Azia, fanafody kely kokoa ho an'ny aretin'ny vavony sy antihistamine. Antiseptika, hasi-tànana, fanafody ho an'ny kaikitry ny bibikely.
Kitapo fanampiana voalohany tena fialam-boly
Raha mikasa fitsangatsangana be any amin'ny tany mikitoantoana (sarotra) ianao, ny fivezivezena na ny hetsika ivelany hafa, dia manaova fehin-kibo vita amin'ny elastika raha sendra misy sprains, dia makà gel sy fanasitranana ihany koa.
Kitapo fanampiana voalohany tora-pasika fialam-boly
Raha any ianao izay misy masoandro be dia be, misy fialan-tsasatra amoron-dranomasina, dia raiso avokoa ny fanafody sunburn: Panthenol, mpamonjy aina. Alohan'ny sy aorian'ny crème sunoir dia hangataka ihany koa. Hamarino tsara fa manana crème SPF 30-50 miaraka aminao, raha sanatria misy masoandro betsaka noho ny tin-sokola vita amin'ny sôkôla :).
Kitapo fanampiana voalohany -dranomasina Tsangatsangana
Ho an'ny fitsangatsanganana an-dranomasina, ao amin'ny kitapo fanampiana voalohany dia ilaina ny fanafody ho an'ny aretin'ny fihetsiketsehana.
Ary aza adino fa rehefa mandeha amin'ny rivotra, raha misy fetra amin'ny kalesin'ny ranon-javatra amin'ny valizy tanana. Tsy mihatra amin'ny olona manana aretina mitaiza izay mitaky fanafody rano matetika. (amin'ity tranga ity, aza adino ny taratasy fanamarinana amin'ny teny anglisy manamarina izany).
Tadidio ihany koa fa any ampitan-dranomasina, eny na dia ny fanafody tsy preskripsi manokana aza dia azo vidiana ao amin'ny farmasia. Ampy hahalalana ny anarany iraisam-pirenena. Ireo anarana ireo dia hita ao amin'ny tranonkala World Health Organization amin'ny ity rohy ity. Amin'ity loharano ity dia ampidiro ny anarana fantatrao amin'ny tsipika "anaran'ny varotra". Ary ny programa dia hanome anao ny singa mavitrika an'io zava-mahadomelina io, izay mila anontanianao any amin'ny farmasia.
Avelao ny dianao handeha mba tsy hiantsoana ilay kitapo fanampiana voalohany isaky ny misy 🙂.
Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo olona mandeha any ivelany. Izany dia vokatry ny antony maro samihafa, manomboka amin'ny faniriana hahita an'izao tontolo izao, hatrany amin'ny dia ataon'ny orinasa (bebe kokoa momba izany eto).
Ny antontan-taratasy manome zon'ny handao ny firenena sy hiditra, ary koa ny fampahafantarana ny mombamomba anao any ivelany, dia pasipaoro vahiny (pasipaoro)
Ny olona malina dia mety manontany izay tokony hatao raha very pasipaorony any ivelany. Hisy hiverina ve any an-trano ?.
Tsotra ny valiny - mazava ho azy. Mba hanaovana izany dia mila mifandray amin'ny iraka diplaomatika na consular an'ny firenenao ianao ao amin'ity fanjakana ity, raha te hahazo antontan-taratasy vonjimaika manaporofo ny maha-ianao anao, ary manome anao ny zony hiverina any amin'ny tanindrazanao.
Raha ny fitsipika, fahazoan-dàlana amin'ny fidiran'ny teratany vahiny ho any amin'ny firenena tsirairay:
Karazana fahazoan-dàlana hiditra ao amin'ny firenena
Fitantanana maimaimpoana Visa (fidirana maimaimpoana)
Visa amin'ny fahatongavana (Raiso eo am-pahatongavana any amin'ny firenena)
Ilaina ny Visa. (Navoaka mialoha)
Ny visa iray dia antontan-taratasy fahazoan-dàlana manome ny olona iray hanana zo hiampitana sisin-tany sasany. Amin'ny maha-fitsipika azy, ny visa iray dia fantatra fa fahazoan-dàlana tena an'ny vahiny iray hiditra amin'ny faritany fanjakana hafa.
Ho an'ny solontenan'ny fanjakana samihafa, ny isan'ny firenena azon'izy ireo tsidihina tsy misy visa, miaraka amin'ny visa amin'ny fahatongavany, na miaraka amin'ny visa natao mialoha, dia miovaova. Ohatra:
Emirà Arabo Mitambatra (Emirà Arabo Mitambatra). 1. toerana eto amin'izao tontolo izao raha ny fahalalahana mihetsika. arymanan-jo hitsidika ny firenena 116 eran'izao tontolo izao izy ireo tsy manana visa. Firenena 57 no mahazo visa ary visa no takiana hitsidika firenena 25.
United States (Etazonia) Faha-15. toerana. Tsy misy Visa ho an'ny firenena 117. Visa rehefa tonga any amin'ny firenena 50. Mitaky visa any amin'ny firenena 31.
Ukraine - Faha-64. toerana. Tsy misy Visa ho an'ny firenena 91. Visa rehefa tonga any amin'ny firenena 43. Mitaky visa any amin'ny firenena 64.
Rosia - faha-88. toerana. Visa maimaim-poana ho an'ny firenena 81. Tonga any amin'ny firenena 37 i Visa. Ilaina ny visa iray any amin'ny firenena 80.
Belarosia - faha-110. ny toerana. Visa maimaimpoana ho an'ny firenena 43. Tonga any amin'ny firenena 40 i Visa. Ilaina ny visa any amin'ny firenena 115.
Afghanistan - Ny farany efa 98 toerana. Tsy misy Visa ho an'ny firenena 5. Visa amin'ny fahatongavany - firenena 25. Mitaky visa any amin'ny firenena 168.
Raha liana amin'ny salan'isan'ny mombamomba ny solontenan'ny fanjakana hafa ianao, dia ianao eto 🙂
Ny pasipaoro dia mety misy karazany roa. Biometrika sy tsy biometrika.
Pasipaoro biometrictsy maintsy manana marika mifanaraka amin'ny fonony. Ankoatr'izay, ao anaty pasipaoro toy izany dia misy tsipika miorina izay hanolorana ny fampahalalana toy izany:
anaran 'ny antontan-taratasy;
isa tsy manam-paharoa amin'ny fidirana ao amin'ny Daftar;
daty lany daty;
daty namoahana ny antontan-taratasy;
orinasa nahazo alàlana namoaka ny antontan-taratasy (code);
sary an-tsary amin'ny tavan'ny olona iray;
sonia nomeraon'ilay olona.
Raha manana fanontaniana ny mpiambina ny sisintany dia afaka mangataka fangatahana elektronika amin'ny firenenao hangataka lakile virtoaly iray izay manokatra ity mombamomba anao ity izy, izay hahafantatra anao koa. Ny pasipaoro biometrika dia nanomboka nampidirina am-pahavitrihana tamina firenena manerantany taorian'ny fanafihana 11 septambra tany Amerika. Ary tsy maintsy tadidinao ihany fa firenena maro no mahazo miditra raha tsy manana pasipaoro biometrika ianao. (pasipaoro tsy biometrika taloha tsy handeha).
Ny faharetan'ny pasipaoro biometric dia 10 taona. Aorian'io, mila ovaina ny pasipaoro vaovao.
Pasipaoro ho an'ny ankizy.
Voalohany indrindra, na ny zaza vao teraka aza dia mila pasipaoro handehanana any ivelany.
Ho an'ny ankizy samy hafa taona dia tsy mitovy ny famolavolana pasipaoro.
Pasipaoro ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona
ankizy hatramin'ny taona 12 aza mahazo dian-tànana. Saingy tsy misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ity antontan-taratasy ity. Mandritra io vanim-potoana io dia mivoaka mandritra ny 4 taona ny pasipaoro. Na dia natao tamin'ny fahazazana tanteraka aza ny pasipaoro dia mila ovaina matetika kokoa ny pasipaoro, satria tokony ho toy ny sary ao anaty pasipaoro ilay zaza. Ary koa, na dia eo aza ny tsy fahampian'ny dian-tànana, tsy mijanona ho biometrika mihitsy ity pasipaoro ity. Fambara iray amin'izany ny fisian'ny puce ao amin'ilay rakitra.
Ny pasipaoro ho an'ny ankizy 12-14 taona
Ny dingana manaraka dia pasipaoro iray ho an'ny ankizy 12-14 taona. Efa ampiana eto ny fanondro fanitsiana, fa raha tsy izany dia mitovy ny zava-drehetra.
Ny pasipaoro ho an'ny ankizy 14-16 taona
Ny dingana "zaza" farany dia ny zaza 14-16 taona... Amin'ity taona ity dia mivoaka ny pasipaoro, miankina amin'ny fahafaha-misy Karatra ID (analogue an'ny pasipaoro anatiny). Ary koa, manomboka amin'ny faha-14 taonany, ny ankizy dia tsy vitan'ny hoe mandefa ny pirinty fotsiny, fa manasonia ny pasipaorony koa.
Pasipaoro ho an'ny ankizy 16 taona
С 16 taona, mahazo pasipaoro "olon-dehibe" tanteraka ny ankizy, izay manan-kery mandritra ny 10 taona.
Pasipaoro vahiny no antontan-taratasy voalohany ilaina mba hahitana ny tontolo lehibe 🙂
Ny singa tena amin'ny politikam-piantohana:
Ny faritry ny politika (Firenena izay nandalovan'ny dianao.)
Ny taonan'ilay olona miantoka (ho an'ny fiantohana ankizy sy ny be taona dia hihena bebe kokoa)
Safidy fanampiny fiantohana izay mety tianao ampidirina ao amin'ny politikanao.
Isan'ny fiantohana (fetra fiantohana)
Io no vola farany ambony azo aloa amin'ny endrika tambin-karama raha misy hetsika voaantoka. Matetika io fetra io dia 30-50 arivo euro na dolara. Mazava ho azy, ny vola toy izany dia tsy ampiasaina raha tsy amin'ny tranga sarotra indrindra (fandidiana sarotra, na fitaterana mankany amin'ny tanindrazana noho ny antony ara-pitsaboana).
Ho an'ny fitsangatsanganana any Eropa, ny fetra natolotry ny 30 euros. Any Azia exotic kokoa, ary koa any Amerika (izay lafo kokoa ny fitsaboana), dia asaina ny mamoaka politika misy fetra 50 XNUMX dolara. Raha ny hetsika ivelan'ny any ivelany dia soso-kevitra ny hampiakatra ny fetra faran'izay bitika ihany, arakaraka izay tena nokasainao hatao amin'ny fialan-tsasatra.
Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mivoaka Fiantohana fototra. Ny fiantohana toy izany dia mandrakotra ny fanomezana ny fitsaboana vonjy taitra na ny marary oroka, ary koa ny fitaterana mankany amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra. Ankoatr'izay, ny fiantohana fototra dia ahitana ny fividianana fanafody natolotry ny dokotera, ary koa ny fikolokoloana mpitsabo nify maika (ao anatin'ny fetra efa napetraka). Voavola koa ny fandehanana dia raha tsy afaka nanidina ara-potoana ny olona iray noho ny tsy maintsy tonga hopitaly.
Raha toa ka tsy afaka manome ny fanampiana ilaina ny dokotera eo an-toerana dia misy ny politika toy izany manarona ny famindrana mpizahatany any amin'ny trano fitsaboana. Ho fanampin'ny voalaza etsy ambony, ny fiantohana ifotony dia manarona ny vidin'ny serivisy serasera raha sendra hetsika voasedra.
Fiantohana ho an'ny asa any ivelany
Ny mpankafy ny hetsika ivelan'ny trano sy ny fomba fatra mandany fotoana dia omena politika manokana, ny vidiny izay, amin'ny fitsipika, dia avo roa heny noho ny fototra. Mazava ho azy, ny fandrakofana ireo fiantohana toy izany dia midadasika kokoa, toy ny antoka lehibe sy ny fandoavam-bola. Tokony ho fantatrao ihany koa fa ny fiantohana ifotony dia tsy mihatra amin'ireo trangan-javatra mitranga any amin'ny toeram-pialan-tsasatra na mandritra ny fomba fanatanjahan-tena mavitrika na mahery setra handaniana fotoana amin'ny dia. Ny orinasam-piantohana tsirairay dia samy manana ny lisitry ny karazana fialamboly toy izany.
Toy izany koa, ny vola miditra amin'ny fiantohana politika dia ho lafo kokoa ho an'ireo mpandeha izay 65 taona mahery. Na izany aza, ity sokajy ny olona ity dia mora voan'ny aretina mety harefo noho ny fomba fiaina tsy azo ovana.
Ny fiantohana maharitra dia midika fiantohana miaraka amin'ny loza fanampiny tafiditra ao. Ny fiantohana toy izany dia arakaraka ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny ankizy kely, bevohoka, na tsara, na izay te ho arovana raha azo atao mandritra ny dia.
maharitra fiantohana dia mety manana safidy isan-karazany, ny setany izay tsy mitovy amin'ny orinasa fiantohana tsirairay. Ohatra, mety misy safidy mahaliana sasany. Toy ny:
Fiverenana vao maraina;
Fitsidihana ny fahatelo;
Fampihemorana ny sidina;
Fanafoanana ny dia (fandavana visa, tsy tafiditra);
Andraikitra sivily amin'ny antoko fahatelo;
Fatiantoka na fanimbana amin'ny kitapo;
fanalefahana ny aretina mitaiza;
Ampio amin'ny alikaola amin'ny alikaola;
Bevohoka hatramin'ny 31 herinandro;
Manampy amin'ny hazandrano;
Fandroahana ny ankizy;
ary maro hafa…. ...
Amin'ny fiantohana fanampiny, mazava ho azy ny hetsika tafahoatra dia azo ampidirina ihany koa.
Aza miantehitra amin'ny tambin-karama raha:
Raha tsy manana fiantohana maharitra miaraka amin'ny safidy manokana ianao, dia TSY miantehitra amin'ny onitra amin'ny tranga miseho amin'ny fanjakana zava-mahadomelina na toaka... Ary koa, fiantohana TSY fandrakofana naratra nandritra ny toe-javatra mahery vaika:
Loza voajanahary (ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy manonitra ny ratra vokatry ny loza voajanahary)
Mety hiakatra ny vidin'ny fiantohana raha mikasa ny hanao fitsangatsanganana any amin'ny firenena exotic malaza iray tsy misy mpizahatany ianao, fitsidihana izay tsy natolotry ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny amin'ny firenenao.
Karazana fiantohana reimbursements.
fanonerana izany... Raha misy hetsika voaantoka, ny mpandeha dia mandoa ny fandaniam-bola rehetra, ary avy eo, rehefa tafaverina an-tanindrazana, dia manolotra ny fanamafisana ny fandaniany amin'ny orinasa fiantohana. Izay, kosa, manonitra ny vidiny voamarina. (tazomy ny tapakila rehetra, mari-pankasitrahana, antontan-taratasy mifandraika amin'ny fisehoan'ilay hetsika voaantoka)
Service. Tena mety kokoa ho an'ny mpizahatany. Rehefa dinihina tokoa, ampy ny fiantsoana ny laharana an-tariby voatonona ao amin'ny politikam-piantohana mba hahazoana fanampiana ilaina ao anatin'ny fiantohana. Amin'ny tranga toy izany, ny orinasa fiantohana dia manonta mivantana ny vidiny.
Vakio tsara ny fepetra momba ny fiantohana izay tadiavinao hofaranana. Aza misalasala mametraka fanontaniana. Miankina betsaka amin'ny fampahalalana voaray.
Mianara amin'ny an-tsipiriany ny fitsipiky ny fitondran-tena rehefa misy hetsika voasivana. Aiza no hiantsoana, iza no hifandraisana? Ireo tranga mifandraika amin'ny tsy fitoviana amin'ny fenitra fitsaboana dia azo atao. Izany rehetra izany dia tokony hapetraka amin'ny ambaratonga voalohany.
Matetika no mandoa ny fandoavam-bola, raha sendra tsy feno na tsy ampy ireo antontan-taratasy. Hamarino tsara fa ny antontan-taratasy rehetra voaray any ivelany dia voasonia sy / na hajia.
Aza vonjena. Aza adino ny manondro ireo firenena rehetra mikasa ny hamangy anao, ary ireo karazan'asa rehetra izay mety mandritra ny fialan-tsasatrao.
Avelao ho tsara daholo ny zava-drehetra, ary ny fampahalalana voaray momba ny raharaha fiantohana dia tsy tokony hampiasaina amin'ny fanazaran-tena 🙂.
Andraikitra amin'ny zotra
Tsy ny rehetra mahalala, fa misy izany
hevitra momba ny overbooking (Overbooking). Tiako ny hilaza azy io amin'ny firafitry ny lohahevitra momba ny andraikitry ny sidina.
Overbooking dia paikady fivarotana ho an'ny entana (serivisy) izay andraisan'ny mpamatsy entana (serivisy) andraikitra bebe kokoa amin'ny famatsiana entana (manome serivisy) mihoatra ny azon'izy ireo atao, amin'ny fanantenana fa tsy ny adidy rehetra tanterahina dia tsy maintsy tanterahina.
Inona izany ary inona no mahasahy mikasika ny lohahevitrao. Ny zava-misy dia amin'ny zotram-piaramanidina malaza matetika no mivarotra maromaro fanampiny tapakila, manantena fa misy olona noho ny antony ilainy miovaova hevitra lalitra na manidina fotsiny tara ny tara... Fa raha tonga tampoka eny amin'ny seranam-piaramanidina daholo ireo izay nividy tapakila, dia misy ny tarehin-javatra misimisy fa maro ny mpandeha no misoratra anarana amin'ny sidina noho ny toerana misy ao anatiny. Vokatr'izany, ny sasany amin'izy ireo tsy manidina. Ary "faran'izay be loatra" izany dia namaly vola.
Aiza no miasa ny overbooking?
Tsy maintsy mahatsiaro fa any Eropa overbooking ara-dalàna (Fitsipika (EC 261/2004), tahaka ny ara-dalàna any Amerika. Any Azia dia miasa isaky ny tranga. Miankina amin'ny zotram-piaramanidina sy ny tranga manokana. Any Russia, Ukraine, Belarus ary firenena maro hafa, ny tambin-karama dia tsy voaloa ary takiana fotsiny ny fanomezana sidina hafa na hamerenana ny vidin'ny tapakila novidiana. Ho tambin-karama ara-moraly, amin'ny fitsipika iray, manome ny fotoana hanidinana ny sidina manaraka amin'ny kilasy fandraharahana izy ireo.
Ny fotoana nampihemoranao anao noho ny toe-javatra toy izany dia tsy maninona. Na dia adiny iray monja aza dia mbola azonao atao ny mahazo onitra feno. Ny sandan'ny onitra dia aloa amin'ny euro ary miankina mivantana amin'ny halaviran'ny sidina. Ohatra, hatramin'ny 1500 km, ny onitra 250 Euro, ary raha mihoatra ny 3500km dia 600 euroabout. Indraindray, ny zotram-piaramanidina dia afaka manolotra voucher ho an'ny tapakila roa mandritra ny taona ho tambiny, saingy tsy manan-jo hisisika amin'izany izy ireo, ary afaka mangataka vola ianao). Mandritra izany fotoana izany, ankoatry ny tambiny, afaka mahazo sakafo fanampiny eny an-tsambo ianao, manatsara ny kalitaon'ny serivisy ary mahazo teboka fanampiny eo ambanin'ny fandaharam-pahatokiana. Ary raha mihoatra ny iray andro ny fahatarana, dia amin'ny fandaniam-bola ataon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia hanana fotoana hialana voly ao amin'ny tanàna misy anao ianao. Amin'ny ankapobeny, ny kaompaniam-pitaterana dia hanao ny zava-drehetra mba tsy hahasambatra anao :).
Hetsika amin'ny fiaramanidina ho an'ny fametrahana overbooking
Raha misy precedent toy izany dia manambara ny fikarohana ireo mpilatsaka an-tsitrapo vonona ny hiandry ny sidina manaraka ho takalony tambiny. Raha tsy misy dia hitan'ny seranam-piaramanidina an-keriny ny isan'ny mpandeha ilaina amin'ny sidina. Misafidy azy ireo araka ny fahaizany manokana izy ireo, toy ny fitsipika, aleony ny mpitovo, mandeha tsy mitondra valizy ary miaraka amin'ny tapakila mora indrindra.
Fepetra ho fanoratana boky
Famaritana kely mba hahatakarana ireo tranga izay azonao atokana amin'ny tambin-karama:
Naharitra 3 ora farafahakeliny ny sidinao
Foanana ny sidinao
Nahemotra latsaky ny 3 ora ny sidinao, fa noho io antony io dia tsy nahatsapa ny sidina fifandraisana mifandray manaraka ianao, ary raha ny farany dia tonga tany amin'ny toerana farany izy ary naharitra adiny 3 mahery
Nolavina ianao nandeha sambo noho ny tsy fahampian'ny seza (overbooking)
Ny fanemorana / fanafoanana ny sidina dia tsy vokatry ny toetr'andro ratsy, fitokonan'ny mpiasan'ny rivotra na toe-javatra mahery
Tsy mihoatra ny 6 taona izay no lasa hatramin'ny sidina
Iza no miahy?
Mahaliana ity lohahevitra ity ary azo antoka fa mahasoa ho an'ny olona manana fotoana voatokana, ary misy ny faniriana handany fotoana mahaliana amin'ny fandaniana ny fiaramanidina. 🙂
Raha ny zava-mitranga amin'ny iray amin'ireo lisitra voatanisa dia ho azo antoka fa hamonjy ny rehetra antontan-taratasy, mpandalo board etc. Ary azonao atao ny mifandray amin'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka amin'ny fangatahana, na mifandray amin'ireo tolotra manokana izay hanao izany tamim-pifaliana ho anao 25% amin'ny vola offset (izay horaisin'izy ireo raha tsy voavaha tsara ny olana). Manome lanja ny lazany ny seranam-piaramanidina, ka noho izany, mazàna, ny olana dia voavaha ho an'ny mpanjifa.
Serivisy ahazoana onitra amin'ny seranam-piaramanidina:
Ny mpitondra eran-tany amin'ny fandoavana onitra - Airhelp
(Bebe kokoa amin'ny AirHelp)
Manidina amin'ny hafaliana 🙂
Torohevitra momba ny dia lavitra miaraka amin'ny ankizy.
Na inona na inona, Zaza, tsara tarehy foana izany. Ary amin'ny lafiny iray, ny zaza amin'ny dia dia singa iray lehibe mametra, ary etsy ankilany, loharanom-pahasambarana tsy mety ritra izy io, ary ohatra iray amin'ny fivoarana tsara sy ohatra tena mila mijery an'izao tontolo izao 😉
Pasipaoro ho an'ny zaza iray
Izay fanontaniana voalohany hapetrakao eo alohanao dia pasipaoro ho an'ny zaza iray. Efa roa taona izay ny zaza tsy mahazo miditra ny pasipaoron'ny iray amin'ireo ray aman-dreny, ary mila manao pasipaoro feno zaza ny zaza.
Vakio bebe kokoa momba izany amin'ny tabila mifanaraka amin'ny pejy. Torohevitra mahasoa.
Nandeha niaraka tamin'ny zazakely
Raha ny filazan'ny renim-pianakaviana, amin'izao vanim-potoana fitsangatsanganana izao, ny zaza toy izany dia mitondra fihetseham-po lehibe indrindra ary miaraka amin'izay fotoana izay, fara fahakeliny ny ahiahy, satria tsy olana ny manova ny diaper, ary azonao atao ny mamelona ny zaza amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza (raha mampinono ny zaza). ary raha mila manafana sakafo ianao, dia tsy holavina any amin'ny trano fisakafoanana na trano fisakafoanana intsony ianao.
Aza hadino torohevitra avy amin'ny dokoterafa ny tontolo mahazo aina indrindra ho an'ny zaza dia ilay efa nahazatra azy. Noho izany, aza manararaotra ny dia ataonao any amin'ny faran'izao tontolo izao, ary mba hisorohana ny acclimatization sarotra sy acclimatization miverimberina rehefa mody any an-trano dia mamporisika anao izahay hanidina manomboka amin'ny fahavaratra ka hatramin'ny fahavaratra, na amin'ny ririnina ka hatramin'ny ririnina. Zava-dehibe indrindra izany raha tsy kasaina hatao lavitra ny dia. (hatramin'ny tapa-bolana). Koa satria ny zaza fotsiny tsy manam-potoana acclimatize.
Inona no horaisinao?
Raha manidina miaraka amin'ny zanakao amin'ny firenena mandroso sivily ianao na any amin'ny firenena malaza mpizahatany fotsiny, dia tsy tokony hitondra enta-bolana ny sakafon'ny zaza sy ny lambam-baravarana, azonao atao ny mividy izany rehetra izany eo no ho eo. Ho an'ny zaza dia ampy ny maka akanjo ampy ho an'ny vanim-potoana, sakafo mandritra ny faharetan'ny dia ary manana fitaovana "ilaina" foana kitapo fanampiana fanampiana (raha mila fanazavana fanampiny momba ny kitapo fanampiana voalohany, jereo ny tabilao mifanentana amin'ity pejy ity).
Sidina amin'ny alina miaraka amin'ny zaza iray
Manoro hevitra izahay fa haka tapakila ho an'ny sidina amin'ny alina (na mihetsika) hialana amin'ny dia "mahafinaritra". Avelao ny zaza hatory am-pilaminana amin'ny fotoana mahazatra ary hahita nofy mamy, fa tsy fikarohana tsy voafehy, ny fomba hampiala-tena amin'ny toerana voafetran'ny fiaramanidina na lamasinina 🙂.
Raha manidina mitovy foana ianao amin'ny tolakandro, dia mitandrema kilalao mangina tsotra, manafintohina izay hahafahanao mampiala ilay zaza. Ho valin'ny farany, fenoy ny findainao amin'ny lalao an-tserasera na / ary alaivo ny sary an-tsary, ary hanana fiadanam-potoana ianao :).
Zahao amin'ny sidina
Mandritra ny fisoratana anarana, jereo raha misy seza tsy misy mandeha eny amin'ny fiaramanidina. Raha izany dia angataho izy ireo mba tsy ho tanterahina. Tsarovy koa fa ny mpandeha manana zaza dia manana ny laharam-pahamehana. Tsy misy filaharana.
Ny bakteria rehetra na aiza na aiza!
Raha misy tahotra sao hahatratra otrikaretina ny zaza (ohatra, any amin'ny firenen'i Azia Atsimo Atsinanana na Afrika na misy nosy) dia tadidio. Ny bakteria na aiza na aiza... Ary mila manohitra azy ireo ianao na aiza na aiza amin'ny fomba mitovy amin'izany - tandremo ny fitsipika momba ny fahadiovana fototra, ary aza avela handeha amin'ny toerana atahoranao ny zanakao :).
Sakafo eny an-toerana
Raha matahotra ianao fa mifidy ny zanakao ka tsy holaviny sakafo eo an-toerana, te hampahatsiahy anao izahay fa any amin'ny fivarotana firenena mandroso fizahan-tany dia afaka mahita ny zavatra rehetra efa zakan'ny zanakao ianao. Nefa koa, tadidio fa ny zaza dia tena tia karokaroka, ary azo antoka fa ho liana amin'ny zavatra vaovao hitany fa hohaniny ao amin'ny sakafo ao an-toerana ny firenena tompon-trano.
Amin'ny tranga ratsy indrindra, amin'ny toeram-pisakafoanana na trano fisakafoanana, amin'ny volanao dia tsy handà izy ireo hahandro ho an'ny zanakao lasopy tsotra na vovobony.
Nefa mailo izany. Ny hery fiarovana ny zazakely rehefa mandeha dia entana be loatra (fiovan'ny toetr'andro, fiovan'ny fizaram-potoana, be loatra ny fanentanana), satria sakafo, ity no (raha ny ankizy manokana indrindra) dia mendrika ny hieritreretana mialoha.
Doro-dakozia ao amin'ny hotely na trano iray
Diniho ny manofa trano fa tsy efitrano fandraisam-bahiny mahazatra trano miaraka amin'ny lakozia, izay azonao mahandro samirery ny zanaky ny zanakao.
Raha any amin'ny firenena mafana ianao (na amin'ny toetrandro mafana loatra), dia arovy ny fisehoan'ny zaza maharitra amin'ny masoandro misokatra.
Tsara kokoa ny hampitombo tsikelikely ny faharetana, manomboka amin'ny 5 minitra isaky ny laharana. Tsara, mandidy headgear, tsara kokoa ny fotsy.
Zava-dehibe io. Ny zaza dia tokony hihinana tsy tapaka, misotro tsiranoka ampy ary matory matetika.
Tia miantehitra amin'ny fiainana ny tsimatimanota fahamarinan-toerana, sy mahazatra fitondrana io indrindra no mora indrindra hitazomana hatrany mandritra ny dia.
Saingy tsy tokony hadinonao ny hanao fanitsiana hanovana ny fizotry ny fotoana, raha misy.
Ataovy azo antoka fiantohana ara-pahasalamana isaky ny ankizy.
Alohan'ny handehanana dia tadiavo ny fampahalalana rehetra momba ny toerana misy ny fitsaharana ho avy dia misy tobim-pitsaboana mety.
Ny maha-mpitsabo anao
Tsy mihoatra ny maka ny laharana finday dokotera ankizyfa any an-trano, rehefa avy nanaiky fa afaka miantso azy amin'ny ambiny.
Ataovy foana Internet и fifandraisana finday.
Aza mitondra ny zanakao any amin'izay tsy hahazoanao azy.
Na aiza na aiza no misy ny ankizy!
Aza hadino fa misy ankizy any amin'ny firenena rehetra, izay midika fa eo ny kianja filalaovana, ny gilasy ary ny mavitrika na matsiro hafa fialam-boly :).
Tony. Milamina fotsiny!
Ary, angamba, ny lehibe indrindra. Ataovy fahatoniana.
Ity no zavatra sarobidy indrindra hoentin'ny ankizy iray amin'ny toe-javatra sarotra.
Travel miaraka amin'ny fahafinaretana. Sokafy izao tontolo izao amin'ny zaza. Na ianao na ianao tsy hanenenany! :).
Mahazo amin'ny dia iray isika
Raha te-tsy vidin'ny vidim-bola no tianao, fa loharanom-bola ihany koa, dia fantaro ny fomba maro hahazoana vola mandritra ny dia.
serivisy mahafinaritra Grabr.io, izay mampivondrona ireo mpandeha sy mpiantsena liana amin'ny fahatsiarovana avy amin'ireo firenena andehananao.
Ireo mpividy momba ity serivisy ity dia mamela fangatahana ny entana ilaina, manondro ny tambin-tsoa karamaina ho azy ireo ary ny mpitsidika dia manaiky ireo baiko ireo, mividy entana ary ento.
Samy liana amin'ny fiaraha-miasa toy izany ny roa tonta. Ity serivisy ity dia somary hyped ary mety hahita zavatra mahaliana anao ianao.
Raha manana lela famoronana ianao, dia mety atombohy amin'ny bilaoginao fitsangatsanganana. Na manorata lahatsoratra fotsiny momba ireo toerana tsidihinao.
Betsaka ny fiaraha-monina mahaliana azy ireo ny manasongadina lahatsoratra momba ny toeran'ny mpizahatany sy ny toerana mahaliana maro. Any ianao dia afaka mandefa fampandrenesana ireo lohahevitr'ireo lahatsoratrao, na mandray baiko avy amin'ireo gazety teokratika samihafa hanoratana lahatsoratra momba ireo toerana mahaliana ao amin'ilay firenena.
Ho an'ireo bilaogera fitsangantsanganana dia misy ihany koa ny "programa afiliana" isan-karazany manomboka amin'ny mpanangona ka mitady tapakila an'habakabaka, hotely, fanofana fiara ary safidy hafa ilaina ho an'ny mpizahatany.
Aleo miala ao an-tranonao.
Azo inoana kokoa fa hahazoana vola tsy mandritra ny dia, fa mandritra ny dia. Zava-misy fanta-daza fa ny fanofana trano na trano tsy miankina amin'ny tompona dia mahasoa kokoa noho ny famandrihana trano fandraisam-bahiny manana ambaratonga mitovy amin'izany. Misaotra ireo serivisy toa ny Airbnb.ru na Booking.com na ny toy izany, ny fanofa ny tranonao mandritra ny faharetan'ny dia dia asa azo tanterahina.
Makà sary mandritra ny dia
Betsaka ny banky sary sary mila sary izay nalaina.
Toy izany koa ireo lahatsoratra, gazety maro be sy ny haino aman-jery dia faly handray votoaty tsy manam-paharoa.
Ao amin'ny tabilao manaraka ity pejy ity izahay Andao isika handinika fangatahana maromaro ho an'ny fanaraha-maso sy sary fitsangatsanganana.
Fotolia eo no ho eo.
Ity rindranasa finday ity dia malaza be amin'ireo mpamorona, mpaka sary, ary ireo izay tsy te-handray sary foana.
Tsy misy fetra amin'ny lohahevitr'ilay sary, afa-tsy teboka vitsivitsy: Sakafo, voninkazo, biby fiompy. Ny toerana sisa tavela, mihoatra ny ampy amin'ny lohahevitra fitsangatsanganana.
Makà sary, omeo azy ireo teny manan-danja (izany hoe mitady sary mety hividy), ary alao any amin'ny mpandika Fotolia izany rehetra izany.
fampiharana miaraka amin'ny interface mora sy eritreritra. Tahaka ny any Fotolia dia afaka mampakatra sary mitsangatsangana ianao nefa tsy maka sary sakafo.
Ho fanampin'izany, ity fampiharana ity dia manana endrika mahaliana antsoina hoe Challenges. Ity dia karazana asa izay angatahana aminao handefa sarinà lohahevitra iray.
Mitohy mandritra ny andro maromaro izany aorian'izay, ho an'ny sary tsara indrindra omen'izy ireo sarany tsara :).
Azonao jerena ihany koa ny kasety sary malaza. Amin'ny ankapobeny, fampiharana tsara.
Manana valiny tsara be dia be, izay raha mino azy ianao, dia afaka mahazo vola tsara. Miasa amin'ny iOS sy Android /
Rindrambaiko novolavolain'ny iray amin'ireo mpilalao tahiry sary lehibe indrindra - Ity programa ity dia mirakitra ny fiasan'ireo rindranasa roa teo aloha.
Misy koa ny asa (antsoina hoe Tolotra), misy koa ny sary famokarana malaza.
Misy ihany koa ny safidy mampifandray sary amin'ny geolocation, hikaroka amin'ny tenifototra (hashtags), ary ny fahitana mahita ireo sary farany narotsaky ireo mpampiasa izay mipetraka eo amin'ny toerana ara-jeografika eo akaikinao.
Ny fampiharana avy amin'ny ekipa failandey dia mitovy hevitra amin'ny roapolo20. Ny mitovy orientation amin'ny asa (Asa).
Tsy misy kasety aminy, fa ny mifanohitra amin'izany dia misy asa maro teokratika. Ka andramo ny tenanao amin'ny kesempatan ity.
Raha ilaina dia tsy voatana intsony.
Amin'ireo minus, ny fampiharana dia tsy tohanana goavan'ny stock. Fa raha tsy izany dia tonga saina ny fampiharana azy. Betsaka ny hevitra tsara manamarina an'io.
American startup. Tanora sy mamorona. Ny asa tena isan-karazany.
Eto dia ho mora ny hahita hoe aiza no hampiharana ny sary nalaina nandritra ny dia.
Misy rafitra mitombo mahaliana.
Ary ny haavon'ny haavonao dia manjary mahaliana kokoa, ary noho izany dia betsaka ny karama azonao.
Ny fampiharana dia avy any Eropa. Mahavita zavatra betsaka. Asa maro, lohahevitra maro.
Misy ny sary mirakitra azy, misy sary finday efa an-tapitrisany maro.
Endri-javatra mahaliana iray dia ny fanaraha-maso ny fahamendrehan'ny sary amidy dia ataon'ny mpisera mihitsy, izay manome naoty ity na ity sary amin'ny baolina.
Ny fampiharana dia toa sahala amin'ny Instagram.
Misy zatra ny sivana sary namboarina betsaka.
Manana fisavana am-pikarohana eo akaikin'ny toerana misy anao.
Misy asa, ary koa ny amboaram-panahy namana sy banky sary.
Mba hisintonana ny vola azo, ireo soso-kevitra ireo dia milaza amin'ny fampiasana PayPal.
Raha ny fitsipiky ny foibe, voalohany indrindra dia ilaina ny manome hatsiaka. Mba hanaovana izany, dia afaka mampiasa ranomandry na vokatra manta mamanala avy ao anaty vata fampangatsiahana. Tsy azo ekena ny fampiharana ny ranomandry mivantana amin'ny hoditra. Zava-dehibe ny manarona ny ranomandry amin'ny lamba malefaka, ohatra, lamba famaohana.
Eo anatrehan`ny bruising, peroxide dia tsy maintsy ampiharina eo amin'ny sehatry ny hoditra. Mitombina ny mampihatra ny retodie iodine amin'ny faritra voan'ny voho (raha tsy misy ny allergy iodine amin'ny lasibatra).
Zavatra mangatsiaka amin'ny foza (raha matanjaka tsara) dia tokony hampiharina mandritra ny 20 minitra, avy eo miala sasatra miaraka amin'izany. Ny fahatapahana mangatsiaka dia mahomby mandritra ny andro voalohany aorian'ny fanaovana bruise, dia tsaboina amin'ny hafanana izy io mba hanafainganana ny resorption.
Loza amin'ny feny
Ny ratra amin'ny atidoha dia toe-javatra mampidi-doza tokoa izay ilain'ny hopitaly eo no ilaina.
Ny fanampiana alohan'ny hahatongavan'ny fiara mpamonjy voina raha misy ratra amin'ny atidoha dia tokony ho toy izao manaraka izao:
Napetraka eo ambony lemaka sy mafy ny lasibatra.
Ny haavon'ny fahatsiarovany dia voafaritra.
Apetraho eo an-daniny ny olona iharan'izany, satria ny vava dia mety misy ratra toy izao.
Raha misy ny fihanahan-dra dia ampiasa bandage.
Raha ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena, dia ilaina ny mampiasa ammonia rano na rano mando ny tarehy.
Ny fihanaky ny fo sy ny fanaraha-maso. Raha tsy misy ireo dingana ireo dia mila mamerina ny lamosin'ilay lasibatra ianao ary manomboka manomboka ny fifohana tsipika.
Aza avela hisotro rano ny niharam-boina, satria mety hiteraka fivontosana izany.
Mila maka ny ranomandry ianao, manarona azy amin'ny lamba ary mampihatra azy amin'ny cruise.
Raha tapitra ny tenanao
Voalohany dia mila mandinika ny faritra simba ianao mba hahazoana antoka fa tsy misy ny fandrahonan'ny rà mafy. avy eo:
Afohy amin'ny rano ny ratra (esory ny fery ao anaty rano hanala ny loto ary hanombatombana ny halalin'ny fery).
Akory ny fery amin'ny bandage na gauze madio. Raha tsy misy gauze na bandage dia avela mampiasa akanjo matevina.
Atsangano ny sandrin-tanana na tongotra iray avo noho ny haavon'ny vatana, izay hampihena ny fikorianan-dra mankany amin'ny faritra voatapaka, aorian'izay dia mihosotra ny rà.
Karakarao amin'ny tranon-jana misy ratra antiseptika sy menaka amin'ny maintso maitso. Na izany aza, tokony ampiharina irery eo amoron'ny tendron-jaza, tsy azonao atao ny mameno ny fery, fa raha tsy izany dia mitaky fitsaboana efa nodorana izany.
Raha ilaina dia asio lamba napkin (sterile ihany) ary amboary amin'ny fehikibo na patch.
Amin'ny rà mavesatra dia mila sakanana izany amin'ny fanindriana amin'ny fery. Ho an'ity tanjona ity, takiana ny manamboatra entona avy amin'ny fantsona na fitaovana malefaka maloto hafa, izay avy eo atsipy any amin'ny toerana maratra. Aorian'ny fanakanana ny rà (tao anatin'ny minitra vitsivitsy, farafahakeliny tsy mihoatra ny 15) dia mila manisy takelaka ianao raha tsy manala entona toy izany. Raha mando ny lamba napkin amin'ny tsy fisakanana ny fandehanan-dra, tsy azo esorina amin'ny toerana naratra ilay lamba. Mifanindry amin'ny iray hafa.
Raha misy simika
Raha mikatona ilay fracture
Raha afaka miantso ambulance ianao, dia tokony hanao izany haingana avy hatrany. Avy eo dia mila miantoka ny tsy fahatomombanana ny tongotra naratra na ny sandrinao. Ohatra, azonao atao ny mametraka rantsan-tànana amin'ny ondana ary hiantoka ny fihavanana. Zavatra mangatsiaka dia tokony apetraka amin'ny tranokala fracture. Zava-mahasoa ny misotro dite mafana na fanatoranana.
Ahoana ny fomba fifangaroan-java-mihetsika
Raha ny resaka fitaterana an-tery, ianao no tokony hametraka kodiarana aloha azo amboarina amin'ny fitaovana tsy namboarina.
2 misy zavatra matevina azo ampiharina amin'ny andaniny roa amin'ny lamba eo ambonin'ny akanjo. Avy eo dia tsy maintsy azo itokisana izy ireo, fa tsy tery loatra (mba hisorohana ny tsy fifindraan'ny arofenitra) mba hamboarina miaraka amin'ny fehikibo na fitaovana mety (fehikibo, tady, tady).
Ny fanitsiana ny tonon-taolana roa dia ilaina - etsy ambony sy ambanin'ny tranokala ratra. Ohatra, raha misy fahatapahana ny tongotra, ilaina ny fanamboarana ny tenda sy ny lohalika, ary raha misy ny vombony, ny andiany tsirairay dia mila raikitra.
Amin'ny tranga rehefa tsy misy na inona na inona, ny sandry na tongotra iray simba dia afaka fehezina amin'ny sandrin-tanana na tongotra.
Ilaina ny fitaterana ilay niharam-boina izay nahazo fahatapahan-tongotra amin'ny toerana fiasa; ny tongotra maratra dia tokony atsangana isaky ny misy izany.
Raha misokatra ny fracture
Ny fihodinodinana toy izany dia mampidi-doza kokoa noho ny mihidy, satria mety hisy ny aretina.
Raha misy rà dia mila hajanony aloha. Raha tsy dia misy dikany, azonao atao ny mametra ny tenanao amin'ny fampiharana fehin-kibo. Raha mafy ny rà dia ilaina ny fitsidihana, ary tokony ho voarakitra ny fotoana fampiharana. Amin'izany dia rehefa mila adiny iray sy sasany mahery ny fitaterana, mila manafoana ny tourniquet isaky ny 3 minitra mandritra ny XNUMX minitra ianao.
Sokafy ny antiseptika fracture
Manodidina ny faritra maratra dia ilaina ny mampihatra antiseptika (ohatra, ny ioda na ny maitso mamirapiratra). Raha tsy misy antiseptika akaiky, ny ratra dia tokony ho rakotra lamba landy.
Avy eo, ny kodiarana iray dia ampiharina, toy ny fahatapahana mihidy, ilay toerana tsy maintsy ialana ny taolana mihanaka ihany. Avy eo dia tokony halefa any amin'ny toeram-pitsaboana haingana ilay niharam-boina.
Raha voan'ny bibilava
Ny lasiboky bibilava iray dia tokony apetraka amin'ny fahitàna ary hahazoana antoka ny fandriampahalemana, avy eo omena takelaka antihistamine 2.
Aorian'io dia afangaro moramora amin'ny fery miaraka amin'ny vava ny poizina ary miaraka amin'izany fotoana izany dia mihintsana ny faritra maratra ary mihetsika mankany amin'ny ratra. Rehefa tanterahina ity hetsika ity dia tafakatra hatramin'ny 7 isan-jaton'ny poizina ilay izy ao anatin'ny 40 minitra voalohany aorian'ny farangonana. Zava-dehibe ny hamoaka ny fantsom-panafody matetika kokoa. Aorian'ny famenoana ny fizotrany dia sasao ny vavanao amin'ny vahaolana potasioma permanganate, raha misy izany. Raha tsy eo dia azo ampiasaina ny rano mahazatra. Raha misy ratra ao am-bava dia tsy azo ekena ny feon'ny poizina amin'ny vava.
Nivonto avy amin'ny bibilava
Rehefa mipoitra ireo famantarana voalohany momba ny edema, dia tokony haondraka ny poizina, ary ny tranok'aina dia tsy maintsy tsaboina amin'ny antiseptika. Mandritra izany fotoana izany dia tsara kokoa ny tsy mampiasa zielonka, fa raha tsy izany dia ho sarotra ny fandinihana ny ratra ataon'ny dokotera.
Manaraka, fitafy milamina dia mihatra amin'ny faritra voakasik'izany. Mandritra ny fampandrosoana ny edema, ilaina ny mamparefo azy rehefa mandeha ny fotoana, raha tsy izany dia hianjera amin'ny vatana.
Sunstroke. Hanao inona
Voalohany, alefa any amin'ny faritra milay sy mangatsiatsiaka ilay niharam-boina. Ilaina ny manome azy io ny laharam-piangonana, atsangana ny tongotrao. Avy eo dia mila mamaha ny fitafiany ianao, manokatra ny varavarankely raha toa ka tsy maintsy omena ao anaty trano ny fanampiana. Rehefa dinihina tokoa, mila rivotra vaovao ny lasibatra.
Mba hampangatsiahana ny hoditra dia ampiharina ny andiana lamba natsipy anaty rano mangatsiaka. Ny fitsaboana ny rehydration dia natao koa - mila tratran'ny rano kely kokoa ilay niharan-doza. Mety mineraly na rano tsotra izy io. Raha ny rahona matevina, dia ilaina ny mifoka amonia. Misy dikany ny manondrana sombin-damba voatondraka amin'ny ammonia amin'ny tratran'ny lasibatra, na esory amin'ny whisky.
Manamaivana ny hafanana mandritra ny sunstroke
Tsy azo atao ny manome fanafody antipirina. Tapaho ny tongotra sy ny felaka miaraka amin'ny vinaingitra (ny rano sy ny vinaingina dia afangaro mitovy amin'ny mitovy.
Mandritra ny sunteroke, ny hazandrano iray dia mety hitranga ihany koa izay mitovy amin'ny fandoroana mafana: hita amin'ny fahitana mena, ny hoditra, ary ny fofona eo aminy. Bepanten, Panthenol na spray hafa iray hanoherana ny may dia atsofoka eo amin'ny toerana may.
Voalohany indrindra dia tokony hiala amin'ny dobo ianao. Avy eo dia diovina ary tarafina ny sefon'ny lotra. Avy amin'izany dia mila manaisotra ny sisa tavela amin'ny lavenona amin'ny gazoala ianao. Tsy azo ekena ny manadio ny fery amin'ny tananao, raha tsy izany dia azo atao ny doro vaovao. Mba hanadio ny faritra simba, dia afaka mampiasa lamba napkin na landihazo. Ny fomba tsotra sy haingana indrindra dia ny manasa ny hoditry ny gazoala miaraka amin'ny zavatra toy ny vahaolana soda na rano sira. Tsy ekena ny hanaovana an'io rano madio io, vao hanimba ny may fotsiny izy io.
Famokarana raha kitsoka
Avy eo dia notetehina lotion ho eo amin'ny toerany io. Ny fisian'ny vinaingitra paoma, ny alikaola na amonia, ny lotion toy izany dia tsy sarotra atao. Miaraka amin'ny fanampiany, azo atao ny fanafoanana ny poizina. Mba hanalevanana ny mofon'ny gazoala dia azo atao ihany koa ny fampiasana ny urin'olombelona vao azo.
Avy eo dia tokony hesorina ny fanaintainana sy ny fivontosana. Ny fanafody tsara indrindra ho an'ity dia ny crème na gel misy hydrocortisone, izay mampihena edema. Ny fanaintainana dia azo esorina amin'ny zava-mahadomelina sy ny menaka ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo bibikely bibikely. Ohatra, gels mahomby amin'ny antihistamine sy hetsika fanoherana ny fanaintainana dia Fenistil-gel sy Psilo-balm.
Tokony hisotro tsiranoka betsaka ilay lasibatra.
Aorian'ny fanampiana voalohany dia tokony hifampidinika amin'ny dokotera ianao, satria ny gazoala sasany dia loza lehibe, ary ny akondro iray dia mety hiteraka fahasarotana na fihetseham-po alikaola.
1 herintaona lasa izay
Oay !! 🙂
Firy no ao ...